Apple yatotengesa yakadzorerwa Apple TV 4K muSpain | IPhone nhau
Apple yatotengesa Apple TV 4K yakagadziridzwa muSpain
Kutsvaga Apple TV 4K nemutengo wakanaka? Sezvaungave iwe uchinyatso kuziva, Apple inotengesa zvigadzirwa zvakagadziridzwa kana kugadziridzwa mune zvese zvayo zvitoro. Mazuva mashoma apfuura, ekutanga mayuniti eazvino Apple TV modhi akatanga kusvika muUnited States chikamu. Ikozvino mauniti ekutanga anosvika kuSpain aine mutengo wakanaka pamutengo wepamutemo.
Ngazvive sezvazvingaite, zvinokwanisika kuti mutengi anowana kubata zvimwe zveApple michina uye pakupedzisira, mushure memazuva mashoma, ziva kuti havasvike zvavanotarisira. Apple inopa mukana wekukwanisa kudzorera icho chigadzirwa uye kuti mushandisi anodzoka kuzodzosera mari yavo. Zviri muzviitiko izvi - kana mune vamwe nekuda kwekuparara, nezvimwewo - kuti midziyo inoongororwa zvakare, chero chiratidzo chekubiridzira nevamwe vanhu chinobviswa uye chinotengeswa nemutengo uri nani. Ehezve, kugara uchifunga kuti iwe unenge uine garandi pakati kana zvombo zvikatadza. Yekutanga Apple TV 4K mayunitsi atove kuwanikwa kuSpain. Uye vanogona kuve 32 kana 64 GB chinzvimbo.
Yakagadziridzwa Apple TV 4K yakaderedzwa kusvika ku15% kubva pamutengo wayo wenguva dzose; ndiko kuti, iwe uchachengetedza angangoita makumi matatu euros. Mune mamwe mazwi: kana iwe ukawana 30GB 4K Apple TV, mutengo wechikamu chakadzorerwa ndeye 169 euros (mutengo waro wepamutemo ndi199 euros). Kune rimwe divi, kana iwe ukawana yakagadziridzwa Apple TV 4K ye64 GB yehukuru, mutengo unenge uri 189 euros (mutengo waro wepamutemo ndeye 219 euros).
zvose Yakagadziridzwa 4K Apple TV ine warandi yegore rimwe; Ivo vanofambidzana neremote control, tambo dzemagetsi uye vanotakura bhokisi nyowani. Kune zvimwe zvese, izvi zvinopihwa zvinowanzobhururuka kubva muchikamu cheApple uye zvikamu zvacho zvine mashoma, saka kana uchifarira, kumhanya uye usafunge nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Apple yatotengesa Apple TV 4K yakagadziridzwa muSpain
Apple Inoburitsa iOS 11.3 Beta 2 YeVagadziri
Isu tinounganidza ongororo dzekutanga dzePambaPod